Ubonge abasebenzi owaseMhlathuze ngokuthola umbiko ongenagcobho – Sivubela intuthuko Newspaper
Ubonge abasebenzi owaseMhlathuze ngokuthola umbiko ongenagcobho
UBUHOLI boMkhandlu waseMhlathuze, enhla nesifundazwe saKwaZulu-Natali, buyazigqaja ngokusebenza ngokuzikhandla okuholele ukuthi lo Mkhandlu uthole umbiko kaMcwaningimabhuku kazwelonke, ongenagcobho.
Ocwaningweni lwakamuva lo Mkhandlu uphinde wafakwa ohlwini lo masipala abayisithupha abathole lo mbiko esifundazweni saKwaZulu-Natali, nabangama-33 kuzwelonke. UMhlathuze usuthole umbiko ofanayo iminyaka emihlanu ilandelana.
Isimimezelo sombiko wakamuva sikhishwe ekupheleni kwenyanga kaMay, ngesikhathi lo Mkhandlu wethula isamba semali elinganiselwa ku R3,5 billion nohlose ngayo ukuqhuba izinhlelo zentuthuko eminyakeni emithathu ezayo.
Phakathi kwezinhlelo zentuthuko kubalwa ukuphakela imiphakathi yakule ndawo amanzi, ukukhucululwa kwendle, ukufakwa kukagesi, ukwakhiwa kwemigwaqo, ukwakhela abantu izindlu nokunye okuningi.
Lo Mkhandlu uphinde wabalula ukuthi uyaqhubeka nezinhlelo zokuthuthukisa abantu kwezomnotho, waphinde wathembisa izakhamizi zendawo ukunciphisa imali yentela ekhokhwa ngabantu abasebenzisa izinsiza ezikhokhelwayo ezitholakala kumasipala.
Ngaphandle kombiko wakamuva, uMhlathuze usanda kukleliswa phezulu ohlwini luka Mgcinimafa kazwelonke lomasipala abenze kahle abali-17 kuzwelonke okufaka phakathi neMikhandludolo. Ihhovisi likaMgcinimafa lincome lo masipala ngokufaka lesi samba semali ezinhlelweni zokuthuthukisa abantu.
Imeya, uCllr Mduduzi Mhlongo ubonge abasebenzi nozakwabo ebuholini boMkhandlu wathi lo mbiko uwumphumela wokuzinikela kwabo emsebenzini.
“Sijabule kakhulu ngombiko esisanda kuwuthola. Ukuthola lom bika amahlandla amahlanu elandelana kuyimpumelelo enkulu kuthina njengoba kwenza kube lula ukuheha abatshalizimali bamazwe omhlaba kuphinde kulekelele ekwakhiweni kwamathuba omsebenzi,’ uCllr Mhlongo .
Uqhubeke wancoma abacwaningimabhuku bangaphakathi kumasipala kanye nezinhlaka ezibhekele ukuphathwa kwezimali wathi lo mbiko ukhombisa ukuthi umsebenzi bawenza ngendlela efanele. Ukhuthaze laba basebenzi ukuthi baqhubeke nokubeka phambili izidingo zabantu.
OwaseMandeni uthembisa ukuqeda imijondolo
OweseMtuba ezinhlelweni zokubuyisa isithunzi kwezemidlalo